Mooziko, YouTube Afrikana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Jolay 2017 11:14 GMT
Nandanjalanja ny lafitsara sy ny lafiratsin'ny Mooziko, ny YouTube Afrikana, tamin'ity herinandro ity ny Bilaogin'ny PKJ Agency, bilaogy iray izay “manao topimaso manerantany momba ny Aterineto Afrikana”, ary niteraka adihevitra vitsivitsy tao anatin'ny dingana nataony. Hoy ny bilaogy:
Raha vao novidiana tamin'ny volabe mihoapapana 1.65 lavitrisa dolara ny YouTube dia hitako ilay rahalahiny afrikana kely Mooziko tamin'ny alalan'ny tranonkala Africa2point0.com . Ahitana endriny 2.0 maro samihafa ny tranonkala ary somary gaga tamin'ny tolotra nomeny aho. … Na izany aza, manana fanehoan-kevitra aho momba izany:
* Be loatra ny dokambarotra
… Rehefa mitady ny lahatsary, maro loatra ireo dokambarotra miseho noho ny tena votoaty eo amin'ny efijery.
* Varavarankely vaovao isaky ny lahatsary
Nahoana no tsy aseho miaraka eo amin'ny varavarankelin'ny fikarohana ny lahatsary? …
* Ny rohy mankany amin'ny lahatsary
Mino aho fa raha manana rohy mivantana mankany amin'ny lahatsary mba hanafainganana ny haivarotra ny tranonkala dia hahazo tombontsoa . Mirona kokoa any amin'ny fandefasana rohy mivantana ny olona noho ny fandefasana ny rohy mankany amin'ny pejy misy ny lahatsary sy manisy hafatra hoe “kitiho eo amin'ny bokotra ‘play’, dia ho hitanao izany !!”.
Tena mahaliana ny tetikasa na dia teo aza izany. Mampiseho izany fa azo sitranina haingana ny fahataran'i Afrika amin'ny resaka teknolojian'ny habaka. Afaka maneho ny tenany ho toy ny iray amin'ireo mpisava lalana ho an'ny taranaka vaovaon'ny tranonkala panafrikana ny Mooziko .
Azo antoka fa handroso hatrany ireo servisy afa-miara-miasa ao amin'ny kaontinanta ary hahaliana ny hahita ny firoboroboan'ny fitaovana ifandraisan'ireo vondrom-piarahamonina izay mamela ny tranonkala samihafa mba hahazo tombontsoa tsirairay avy amin'ny fifamoivoizan'ny tranonkala hafa. Mila miforona ny vondrom-piarahamonina manan-danja mba hahazoan'ny rehetra tombontsoa, kanefa tsy ho tanteraka izany raha tsy misy ny karazana fifanakalozan-kevitra eo amin'ireo tranonkala Afrikana vaovao ireo.
Momba indrindra ny olan'ny dokambarotra no tena nahitana ireo mpaneho hevitra tamin'ny lahatsoratra .
Ho an'i Etum,
Koa satria maimaim-poana ny fidirana amin'ny tranonkala, dia heveriko fa tsy tokony hitaraina momba ny dokambarotra isika. Ny maodely ekonomika no nofidin'izy ireo amin'izao fotoana izao, kanefa mino aho fa hivoatra izany. Ho hita eo ny tohiny.
Niresaka momba ny olan'ny fitrohana lahatsary ny mpaneho hevitra hafa izay novalian'ny iray hafa fa mbola ao anatin'ny dingana beta aloha amin'izao ny tranonkala.